Peugeot / Citroen ထုတ်လုပ်သူများအတွက်သော့ခွံ | Peugeot / Citroen စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် China Key Shell
Peugeot / Citroen အတွက်အဓိကအခွံ
Peugeot 207 307 407 SW 308 607 အတွက် New Button သုံးခုအတွက်ခလုတ်ခုံသုံးအဝေးထိန်းခလုတ်အခွံခွာ။
ဖော်ပြချက် - ခလုတ်များကျိုးခြင်းသို့မဟုတ်သော့ခတ်ထားသောအဖုံးများဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ သော့ကိုအမှုနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း key ကိုဓါးကိုသာ။ အဘယ်သူမျှမအီလက်ထရောနစ် chip ကိုအတွင်းပိုင်း။ ဒေသခံသော့ခတ်လုပ်ငန်းရှင် / အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှသင့်မူလပစ္စည်းကိုဖြတ်ယူပါ။ မူလဝေးလံခေါင်ဖျားမှအတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန် (immobilizer / transponder ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သော) ကိုယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအခွံသို့ထည့်ပါ၊ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အမျိုးအစား: အစားထိုးသော့ချက် Shell Key ကွက်လပ် - ဟုတ်သည် Button:3ခလုတ်များ Transponder ချစ်ပ် - မပါ ၀ င်သည့်ဘက်ထရီ - မပါ ၀ င်သောအီလက်ထရွန်းနစ် - မပါဝင်သည် ...
Peugeot 308 207 307 3008 807 Citroen C2 C3 C4 ကားအတွက်အဝေးထိန်း Key Shell Case အတွက်
Peugeot 308 207 307 3008 807 Citroen C2 C3 အတွက် Car Remote Key Shell Case အတွက် Peugeot 308 207 307 3008 807 Car Remote Key Shell Case Citroen C2 C3 C4 ထုတ်လုပ်မှုအတွက် - Key Shell (Groove မပါဘဲ Key Shell နှင့် Uncut Blade .Not အီလက်ထရောနစ်အတွင်းပိုင်း) ။ အမှတ်တံဆိပ်: XUKEY သတိပေးချက် - CE0536 အမျိုးအစားအတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်၊ Groove မပါဘဲဓါးသွားဓါးသွားခလုတ် - အမှတ်တံဆိပ်: မပါသော Transponder ချစ်ပ် - အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီမရှိ။ ထူးခြားချက်များ - ၁ ။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များနှင့်သို့မဟုတ်သော့ခတ်ထားသောသော့ခွံဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ၂ ။
Peugeot အတွက် Citroen C1 C4 အတွက်ခလုတ် ၂ ခု Button များ 106 107 207 307 407 206 306 406 Car Remote Key Case Cover
Peugeot အတွက် Citroen C1 C4 အတွက်ခလုတ် ၂ ခု Button များ 106 107 207 307 407 206 306 406 ကားအဝေးထိန်းသော့အဖုံးဖုံးအခွအေနေ - 100% Brand New Colour: ပုံပြသလိုပဲကွက်လပ်ကွက်လပ် - Yes Button:2Logo Sticker: Transponder Chip : အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီမရှိ။ အလေးချိန် - ၁၈ ဂရမ်အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) - ၈၀ (L) x ၃၆ (W) x ၁၆ (T) အရွယ်အစား (လက်မ) - ၃.၁ (L) x ၁.၄ (W) x ၀.၆ (T) အသွင်အပြင်: ကျိုးလွယ်သောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ 2.Key ကိစ္စသာ။ မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် internals ။ ဒါနောက်ဆက်တွဲ
Peugeot 107 207 307 407 308 408 Partner Citroen C3 C4 C5 C6 Berlingo Picasso Xsara အတွက်ကားသော့ Shell HU83 CE0536 / 523
Peugeot 107 အတွက် 20.7 307 407 308 408 Partner Citroen C3 C4 C5 C6 Berlingo Picasso Xsara အတွက်ကားသော့ Shell HU83 CE0536 / 523 ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏အဓိက frist ကိုစစ်ဆေးပြီးမှာယူပါ။ တပ်ဆင်မှု - Peugeot 107 207 307 307S 308 407 607 CE0536 အတွက် Citroen C2 C3 C4 C3 ။ C6 C8 Xsara နှင့်အောက်ဖော်ပြပါကဏ္asတွင်ဖော်ပြထားသောသော့အလွတ်နှင့်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်…အခြေအနေ: ၁၀၀% အသစ်အရောင် - ပုံကိုပြသခလုတ်များ - ၂/၃ ခလုတ်များ Key Blank: ဟုတ်သည် Transponder Chip: No Electronics / Battery: မဟုတ်ပါ။
Peugeot အတွက် Citroen Elysee Saxo Xsara Picasso Berlingo C2 C3 အတွက်အဝေးထိန်း Entry Key Key Fob Shell Case 106 206 306 205 405
Peugeot 106 206 306 205 405 အတွက် Citroen Elysee Saxo Xsara Picasso Berlingo C2 C3 အတွက် Remote Entry Key Fob Shell အခွအေနေ - 100% Brand New အရောင်: Black Button:2ခလုတ် Key: Blank: ဟုတ်တယ် Transponder Chip: No Electronics / Battery: Logo: No Logo: အဘယ်သူမျှမအင်္ဂါရပ်များ: 1. ကျိုးသောခလုတ်များသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသော့ချက်ကိစ္စတွင်နှင့်အတူသော့ကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုး။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. သင့်ရဲ့မူရင်းနှင့်အတူဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်များကဖြတ် Blade ကိုရယူပါ။ ပြည်တွင်းအီလက်ထရွန်ကိုယူပါ။